एक महिनामै दोब्बर पुग्यो आलुको भाऊ ,किन हुँदैछ मूल्यवृद्धि ? – Janapriyakhabar
काठमाडौँ । मौसमी उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध आएका कारण बजारमा तरकारीको मूल्य उच्च रुपमा बृद्धि भएको छ । भान्सामा सबैभन्दा धेरै खपत हुने तरकारीहरुमा ५ गुणासम्मको मूल्यबृद्धि देखिएको हो । बजारमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने तरकारीको रुपमा रहेको आलुको भाऊ एकै महिनामा दोब्बरसम्म पुगेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्कले अघिल्लो महिनाको तुलनामा तरकारीको भाऊ ४४१.६७ प्रतिशतलेसम्म वृद्धि भएको देखाएको छ ।
बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार गत असार ९ गते १२ रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको मुलाको मूल्य श्रावण ९ गते मूल्यमा ४४१.६४ प्रतिशले वृद्धि भई ६५ रुपैयाँ पुगेकोे छ । त्यस्तै, काउली २४८.४८ प्रतिशत, वन्दागोवी २१६.६७ प्रतिशत, सिमी १५७.५८ प्रतिशत र आलु शत प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत महिना काउली प्रतिकेजी ३३, वन्दा गोवी १२, सिमी ३३ र आलु ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेकोमा यस महिना क्रमशः काउली ११५, बन्दा ३८, सिमी ८५ र आलु ५९ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । उक्त मूल्य कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा नै तोकिएको थोक(होलसेल) मूल्य हो । बाहिरी खुद्रा बजारमा अझ यो भन्दापनि बढी मूल्यमा फलफूल तथा तरकारीको कारोबार भइरहेको छ ।
किन हुँदैछ मूल्यवृद्धि ?
मुख्यतः अहिले फलफूल तथा तरकारीको मूल्यवृद्धि हुनुमा मौसमनै कारक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । वार्षातको मौसम हुँदा उत्पादन कमी हुने र उत्पादन भएका पनि बाढी पहिरो तथा बाटोको अवरोधका कारण बजारसम्म आइपुग्न नसक्दा मूल्यवृद्धि हुने गरेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बताए ।
अहिलेको मौसम नै यस्तै हो । वर्षातका कारण कृषिकको बारीमा नै उत्पादन कमी हुन्छ । त्यसमाथि वर्षातसँगै आउने बाढी पहिरो तथा सडकका अवरोधका कारण उत्पादित तरकारी बजार सम्म आइपुग्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा आपूर्ति नै कमी भएपछि मूल्य त बढ्ने नै भयो । उनले भने, ‘यस्तो मूल्यवृद्धि यसपटक मात्र भएको होइन, बेलाबेलामा हुने गरेकै हो । बर्खाको मौसमा गत वर्षहरुमा पनि यस्तै हुन्थ्यो ।’
सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार वर्षातका कारण स्थानीय स्वदेशी उत्पादन बजारसम्म आइपुग्न पाएको छैन भने, उता भारतीय बजारबाट समेत यो समय बाढी पहिलो लगायतका समस्याका कारण फलफूल तथा तरकारी भित्रिन सकेको छैन । जसले गर्दा बजारमा आपूर्ति नै कमी हुन गई मूल्यवृद्धि हुन पुगेको हो ।
किशोरीमाथि बलात्कारपछि हत्या गर्न खोज्ने प्रहरी जवान पक्राउ
गोरखाको बारपाक बजारमा घरमै तीन जना मृत फेला
सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा आजबाट सम्पन्न